कायस्थका ३०३ कथा संग्रहित ‘सुन त मुन्द्रे !’ किताब सार्वजनिक – Everest Times News
कायस्थका ३०३ कथा संग्रहित ‘सुन त मुन्द्रे !’ किताब सार्वजनिक
काठमाडौं । साहित्यककार मोहनबहादुर कायस्थको लघुकथा संग्रह ‘सुन त मुन्द्रे’ को सार्वजनिक भएको छ ।
बिहिबार राजधानीको बिनायो क्याफेमा कार्यक्रम अायोजना गरी लघुकथा समाजका अध्यक्ष श्रीओम श्रेष्ठ रोदन, डा. पुष्करराज भट्ट, ध्रुव मधिकर्मी र लेखक मोहनबहादुर कायस्थले किताब संयुक्तरुपमा विमोचन गरे ।
लघुकथा समाज नेपालको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा लघुकथामाथि विमर्श पनि गरिएको थियो । लघुकथाको वर्तमान अवस्थितिका बारेमा लघु टिप्पणी गर्दै डा. पुष्करराज भट्टले पहिलेको तुलनामा आजका लघुकथा परिस्कृत हुँदै गएको र लघुकथाले सामाजिक विषयबस्तुलाई प्रस्तुत गर्दै आएको बताए ।
विमोचित पुस्तकमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै लेखक मधिकर्मीले कायस्थका लघुकथाले समाजका विविध घटनाहरु बोलेको उल्लेख गरे ।
लेखक कायस्थले भने अाफ्नो किताबमा कथामात्र नभएको र अाफुले भोगेका विभिन्न विषयवस्तु र अनुभव भएको बताए । ३०३ कथाहरू संग्रहित किताब कायस्थ सेवा सदनको साैजन्यमा प्रकाशित भएको हो । किताबको मुल्य ५०० रूपैयाँ तोकिएको छ ।
समाजका अध्यक्ष श्रीओम श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
साहित्यकार पदमालिंखाको गीत 'एक्लो पारी गयौ' बजारमा
भारतमामा कोरोना संक्रमितको संख्या २० लाख नाघ्यो